Guardiola: ‘Ma filaayo in Messi uu ka tagaayo Barcelona’ - BBC News Somali
8 Febraayo 2020
Pep Guardiola, ayaa hoos u dhigay suuragalnimada in Lionel Messi uu ku soo biiro kooxda Manchester City waxaa uuna aaminsanyahay in weeraryahanka uu xirfaddiisa ciyaareed ku soo geba gabeyn doono kooxda Barcelona.
Messi, oo 32 jir ah, ayaa mustaqbalkiisa ciyaareed ku qaatay Barca, laakiin waxaa jira qodob u saamaxaya inuu si xor ah uga tago kooxdaasi markii uu dhammaado xilli ciyaareedkan.
Guardiola ayaa Messi ku tababaray garoonka Nou Camp intii u dhaxeysay 2008 iyo 2012, isagoo seddex jeer ku guuleystay koobka La Liga iyo labo jeer oo u ku geelsyaty Koobka Horyaallada Yurub ee Champions League-ga.
Guardiola ayaa ka tagay Barca waxaa uuna ku biiray kooxda Bayern Munich isagoo noqday tababarihii ugu guusha badnaa, oo waxaa uu afar xilli ciyaareed oo uu kooxdaasi maamulayay qaaday 14 koob.
Image caption Messi iyo Guardiola oo Barcelona wada jooga
Waxa uu intii uu joogay dalka Jarmalka qaaday seddex horyaal oo xiriir ah, sidoo kale waxa uu ku guuleystay Horyaalka Ingriiska ee Premier League-ga labadii xilli ciyaareed ee la soo dhaafay oo uu macalin u ahaa kooxda Macnhester City, inkastoo xilli ciyaareedkan ay 22 dhibcood ka hooseeyaan kooxda Liverpool iyadoo 13 kulan oo kaliya ay ka harsan yihiin Horyaalka Ingriiska.
Messi, oo ku guuleystay abaalmarinta Ballon d'Or lix jeer, 10 horyaal iyo afar Champions League, ayaa qandaraaska uu kula jiro kooxdiisa Barcelona waxa uu ku eg yahay 2021.
Hasayeeshee todobaadkii tagay ayuu ku hadlay hadal uu kaga soo horjeestay agaasimaha ciyaaraha ee kooxda Barcelona, Eric Abidal, kaddib markii ninkaasi u dhashay waddanka Faransiiska uu ciyaartoyda ku eedeeyay in aanay si adag u shaqeyn mudadii uu kooxdaasi tababaraha u ahaa tababare Ernesto Valverde.